Hafatra avy amin'ny Mpitandrina /
"Aza mamono ny Fanahy." 1 Tesaloniana 5:19
"Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka Ahy tsy naman'izao tontolo izao." Jaona 17: 16
Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
Ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy kristy Tompo.
Manasa antsika mpiandry rehetra hiara-mientanan amin'ny fanatanterahana ny Asan'Andriamanitra eto amin'ny Fiagonana izay atao izan'andro manomboka amin'ny 9ora maraina. Indrindra ihany koa ny Alarobia hariva amin'ny 6ora.
Andeha isika hifenome tànana, andeha hifanotrona hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Manasa antsika vahoakan'Andriamanitra izay mila asa sy fampaherezana ihany koa ho tonga eto amin'ny Fiangonana FPVM Fiombonana Tsarahonenana fa miandry anao Jesosy.
"Fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana", "Mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatr'entana fa izaho hanome anareo fitsaharana". Izany no tenin'ny Tompo aminao.
Tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany, Izy ilay nitondra ny helokao, nitondra fanavotana hoahy sy hoanao. Koa aza variana amin'izao fiainana izao fa mandalo sy miserana ihany izany. Koa andeha isika samy hanambara ity teny ity hoe: "...mampianara anay hahay hanisa ny andronay..". Mba hahazoantsika antonka ny fahazoana ny fiainana mandrakizay.
Ny voninahitra dia hoan'Andriamanitra irery ihany.